Komaand Poostiin Kantiibaa magaalaa Naqamtee dabalatee hoggantoota torba to'ate Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKomaand Poostiin Kantiibaa magaalaa Naqamtee dabalatee hoggantoota torba to’ate
Komaand Poostiin Kantiibaa magaalaa Naqamtee dabalatee hoggantoota torba to’ate
Kanneen to’ataman keessaa qondaaltonni ODP keessa jiru
(bbcafaanoromoo)—-Kantiibaa magaalaa Naqamtee Obbo Boggaala Shumaa dabalatee hoggantoonni torba komaand postii nageenya bakkichaa hordofaa jirun to’annoo jala oolan.
Itti gaafatamaan Koominikeeshinii magaalaa Naqamtee Obbo Fayyisaa Birhaanuu BBC’tti akka himanitti, hoggantoonni kuni hunduu dheengadda [Wiixata ganama] to’ataman.
”Shakkiima waan adda addaa waliin wal qabate mootummaan haala jiru qulqulleeffachuuf jecha yeroodhaaf akka to’ataman ta’e jira,” jedhaniiru.
Taphataan kubbaa miilaa Naqamtee akkamiin ajjeefame?
Ijaarsa Istaadiyeemii Wallaggaa waggoota 10 fixeen duuba
Maddi balaa ibiddaa Naqamtee qoratamaa jira
Sababa itti to’ataman irratti wanti bira gahame hin jiru kan jedhan Obbo Fayyisaan, qondaaltonni dhaaba ODP illee to’atamu himaniiru.
”Isaan [kantiibaa] alatti koreen kaabinee magaalaa nama sadiifi paartii ODP keessa hojjetan yeroodhaaf to’annoo seeraa jala oolaniiru.”
Yeroo ammaa qorannoon taasifamaa akka jiruufi namoonni mana murtiitti dhihaatan akka hin jirre qondaalli magaalatti Kibxata waaree booda dubbifne kuni BBC’tti himaniiru.
Kantiibaan magaalaa Naqamtee Obbo Boggaala Shuumaa waggoota lamaa olif bulchiinsa magaalatti keessa tajaajilaniiru.
Kana duras Itti gaafatamaa waajjira ODP ta’uunillee hojjetani turan.
Torban muraasa dura boombii magaalaa Naqamtee keessatti dhohe hordofe lubbuun taphataa kubbaa miilaa tokko darbeera.
Magaalaa Naqamtee dabalate bakkeewwan Lixa Oromiyaa kaan rakkoo nageenyaan walqabate mootummaan Komaand Postiidhaan bulchaa jira.
OPINION: SIDAMA’S QUEST FOR STATEHOOD AND THE QUESTION OF HAWASSA
Wollo Concert: On 20th July at the Millennium hall, Finfinne.